Read more: Soomaa fi gosoota isaa
Read more: “Cubbuu irraa dhiqamuu(qulqullaa’uu) argachuuf Cuuphaa tokkitiitti ni amanna!”
"Namni kamiyyuu cubbuu du'aaf isa geessisu yoo raawwatee murtiin du'aa yoo irratti murtaa'e; yoo mukarrattis fannisteenii; namni mukarratti fannifamu Waaqayyo biratti kan abaarame waan ta'eef reenfisaa mukarra hin buliin." (K.Debi 21:22-23) jedhee Waaqayyo Muuseetiin ajajee tura.
Kana malees, dhaloota Kiristoosiin dura uummanni Faarsii (Iraan) namoota adabuuf jecha yakkkitoota mukarratti fannisanii ajjeesuu aadeffataniiru ture. Ummanni Faarsi, amma Iraan kan jedhaman, "Ormuzed" kan jedhamu waaqa hark tolchee (tolfamaa) lafaa jedhanii kan itti amanan qabu ture. Kanaaf jecha namni yakkamaadha jedhamee itti murtaa'e tokko kan adabamu du'aan yoo ta'e akka waaqasaanii lafaa sanaa hin xureessineef jecha lafarraa ol-kaasanii mukarratti fannisanii ajjeesu ture. Aadaan kunis suuta suuta biyyoota bittaa Roomaa jala jiran hundumaa biratti beekamaa deeme. Israa'elis yommuu sanatti bittaa Roomaa jala waan turteef aadaan kun uummata Israa'el biratti ni beekama ture. Haaluma kanaan namoota yakka hojjatnii adabbiin du'aa itti murtaa'e fannisanii ajjeesu ture. Egaa gaaffiin asirratti ka'uu danda'u, Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos maaliif fannoorratti fannifame du'e kan jedhudha.
Read more: F A N N O O
Read more: Zamana Tsigee ( yeroo Abaaboo)
Read more: Barumsa Amantaa